चाइना गन क्लिनिङ प्याच होल्डर र एडेप्टर ६ प्याक निर्माता र आपूर्तिकर्ता - रोची
गन क्लिनिङ प्याच होल्डर र एडेप्टर ६ प्याक
बन्दुक सफा गर्ने प्याच होल्डरहरू र एडेप्टरहरू6प्याक,6प्याक गन सफा गर्ने प्याच होल्डरहरू/स्लटेड टिपहरू र रड जडान गर्ने एडेप्टरहरू एक मिनी केसमा प्याक गरिएका सबै क्यालिबरहरूका लागि शटगन राइफल ह्यान्डगनहरू फिट हुने विश्वव्यापी बन्दुक सफा गर्ने किट हो। दुई एडेप्टरहरूले तपाईंलाई विभिन्न स्क्रू नटहरूमा सफाई रडहरूमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। स्लटेड प्वालमा सफा गर्ने प्याचहरू राख्नुहोस्, बोरहरू सफा गर्न विलायक वा बन्दुकको तेल छोड्नुहोस्।
बन्दुक सफा गर्ने प्याच होल्डरहरू र एडेप्टरहरू6प्याक
6 प्याक गन क्लिनिङ प्याच होल्डरहरू/स्लटेड टिप्स र रड जडान गर्ने एडेप्टरहरू एक मिनी केसमा प्याक गरिएका सबै क्यालिबरहरूका लागि शटगन राइफल ह्यान्डगनहरू फिट हुने विश्वव्यापी बन्दुक सफा गर्ने किट हो। दुई एडेप्टरहरूले तपाईंलाई विभिन्न स्क्रू नटहरूमा सफाई रडहरूमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। स्लटेड प्वालमा सफा गर्ने प्याचहरू राख्नुहोस्, बोरहरू सफा गर्न विलायक वा बन्दुकको तेल छोड्नुहोस्।
â-४ साइजको स्लटेड गन क्लिनिङ प्याच होल्डर/टिप्सले .177cal./4.5mm देखि 12 गेज सम्मको क्यालिबरहरू भेट्न सक्छ, राइफलहरू, ह्यान्डगनहरू, शटगनहरूका लागि फिट हुन्छ।
â-2 फिटिंग एडेप्टरहरूले आवश्यक भएमा तिनीहरूलाई सफाई रडमा जडान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। पुरुष ५-४० देखि महिला ८-३२; पुरुष 8-32 देखि महिला 5/16-27 बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय रड एडेप्टरहरू हुन्।
â-मिनी केस प्याकेजिङ भण्डारण र बोक्नको लागि मात्र होइन, तर भागहरू नियमित राख्नुहोस्।
â-4 प्याच होल्डरहरू: पुरुष 5-40 मा 4mm, .177-.223 राइफलहरूमा फिट हुन्छ; 5mm पुरुष 8-32 मा हुन्छ, .223-.270cal मा फिट हुन्छ। राइफल; पुरुष 5-40 मा 6mm, राइफलको लागि फिट .270-.357cal, ह्यान्डगन .357-.45cal।; 8mm पुरुष 5/16-24 हो, .357cal बाट सबै शटगन गेजहरू र पिस्तौलहरूमा फिट हुन्छ। र माथि।
â-OEM र ODM स्वीकार्य छन्।
2. उत्पादन योग्यता
3. नमूना, डेलिभरी, ढुवानी र सेवा
â-ढुवानी प्रकारहरू: हामी FOB, CNF, CIF, DDP' स्वीकार गर्छौं। समुद्र द्वारा, हावा द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा।हाम्रो ढुवानी पोर्ट Ningbo पोर्ट, चीन हो।
तटस्थ आवश्यकताहरूको लागि 1-7 दिन। नमूना लागत र एक्सप्रेस शुल्क हामीलाई paypal, tt, वा केहि सुविधाजनक तरीकाले भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
हट ट्याग: गन क्लिनिङ प्याच होल्डर र एडेप्टर ६ प्याक, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, थोक, अनुकूलित, स्टकमा, नि:शुल्क नमूना, चीन, मूल्य सूची